ဘာကိုရွေးမယ်စိတ်ကူးလဲ........ လေဒီ - Hello Sayarwon
လေဒီလေးတွေက နေ့ရက်တိုင်းမှာ လှပစွာနေချင်ကြတယ်နော်။ ဒါကလည်း ဖြစ်သင့်တဲ့အရာပါ။ လေဒီလေးတွေဆိုတာက ပိစိလေးကတည်းက အလှကြိုက်ကြတာကိုး။ လှပမှုက လှပမှုချည်းသက်သက်ဆို မပြည့်စုံပါဘူး။ လှပမှုကို အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် အရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ယုံကြည်မှုပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း နေ့စဉ်တိုင်းမှာ ယုံကြည်မှု ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကတော့ ခပ်ရှားရှားပါ။
လေဒီလေးတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အားလျော့စေတာက ဘာများလဲ………….
လေဒီလေးတွေက ပုံမှန်ချိန်မှာ ယုံကြည်မှု ပြည့်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ တစ်လတစ်ခါ မလွဲမသွေ ကြုံရတဲ့ period time မှာတော့ ယုံကြည်မှု အနည်းငယ် ကျနေတတ်ပါတယ်။ တစ်လတာရဲ့ အဲ့အချိန်ကို ရောက်လာပြီဆိုရင် လူအများကြားကို သွားလာဖို့ မရဲကြပါဘူး။
အနံ့အသက်ဆိုးနေတာမျိုး ဖြစ်မလား၊ စွန်းထင်းနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေ များနေရင်းက ထိုင်နေရာက ထရပ်ဖို့တောင် မဝံ့မရဲ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာလည်း ယုံကြည်မှု မပျောက်ဘဲ လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
လေဒီလေးတို့ ယုံကြည်မှုကို အားဖြည့်ပေးမယ့် အရာ
လစဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ period ကာလကို ယုံကြည်မှု ရှိရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက လစဉ်သုံးကို ကောင်းကောင်း ရွေးချယ်တာပါ။ လစဉ်သုံးလို့ ပြောလိုက်ရင် အရင်ကဆို Pad တစ်ခုတည်းကိုပဲ မြင်မိမှာပါ။ တိုးတက်လာမှုနဲ့အညီ လေဒီလေးတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာ လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကအများကြီးပါ။
ပုံမှန်အဖြစ်ဆုံးတဲ့ လေဒီလေးအများစု သုံးကြတဲ့ sanitary pads
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ အဝတ် Pads
နောက်တစ်ခုက ပြန်လည် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ menstrual cup
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ အပေါ့ပါးဆုံး လစဉ်သုံးလို့ ဆိုရမယ့် Tampon တို့ပါ။
ဒါတွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့ကို ထည့်စဉ်းစားသင့်သလို အရည်အသွေးကိုလည်း သေချာလေး ရွေးချယ်ရပါမယ်။ ဒါမှ ပေါ့ပါးစိတ်ချစွာနဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်မှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဈေးနှုန်းပါ။ ဈေးနှုန်း သင့်တင့်မှလည်း အဆင်ပြေမှာကိုး။ အရင်က မစဉ်းစားဖြစ်ရင်တောင် အခုနောက်ပိုင်း စဉ်းစားဖို့ လိုလာတဲ့အချက်တစ်ခုက ပြန်လည် အသုံးပြုလို့ ရလားဆိုတာပါ။ ဒါမှလည်း နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီး ထိခိုက်မှု နည်းမှာလေ။
ကဲ…….. တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်လား……..
အရင်ကလို မဟုတ်ဘဲ ရွေးစရာတွေ များလွန်းတဲ့အခါ ဘာကိုရွေးရမလဲ မသိဖြစ်နေပြီလား……
ဒါကတော့ လေဒီလေး အများစု အသုံးပြုကြတဲ့ period time friend ပါ။ Pad တွေမှာ နေ့သုံး၊ ညသုံးဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အထူအပါးပါ။ အချိန်ကြာကြာလေး မစွန်းမထင်းရှိစေချင်တယ်။ နောက်လှည့်ကြည့်စရာ မလိုဘဲ စိတ်ချချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အထူကို သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ စုပ်ယူမှု အားကောင်းပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေတဲ့ အသားမျိုးနဲ့ လုပ်ထားတာကတော့ အနံ့အသက်ဆိုး ဖြစ်စေတာကိုပါ ကာကွယ်ပြီးဖြစ်စေမှာပါ။
တစ်ခါသုံးပြီးတိုင်း တစ်ခါ စွန့်ပစ်ရပါတယ်။ ပြန်လည်ဆေးကြောရမှာ၊ လျှော်ဖွတ်ရမှာကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ အိုကေပါတယ်။ လစဉ်တိုင်းမှာ ဝယ်ယူရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ များနိုင်ပါတယ်။ အရည်အသွေး ကောင်းလေလေ စရိတ်များလေလေပါ။ ဓာတုပစ္စည်းကလည်း အနည်းအကျဉ်းတော့ ပါပါတယ်။ ထိခိုက်စေလောက်တဲ့ ပမာဏအထိတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
အားသာချက်က ပိုးသတ်ဖို့ မလိုဘဲ လေလုံအိတ် လုံလုံလေးနဲ့ သွားလေရာကို သယ်ဆောင်သွားပြီး လိုအပ်တဲ့အခါ အလွယ်တကူ သုံးလို့ရတာပါ။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး ၄ နာရီကနေ ၈ နာရီလောက်အထိတော့ အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ပျက်စီးဖို့ ခက်တာကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဒါလေးက မေမေတို့ ဖွားဖွားတို့ လက်ထက်ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုပြီး တကျော့ပြန် ခေတ်စားလာတာပါ။
အဝတ် Pad လေးတွေကလည်း ချည်သားစစ်စစ်ကို ချုပ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပြီး နေရတာ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေမှာပါ။ ဓာတုပစ္စည်း ပါဝင်မှုက zero ပါ။ အကြိမ်ကြိမ်လည်း ပြန်သုံးလို့ ရပါတယ်။
အဝတ် Pad လေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာလျှော်ဖွတ်ပြီး ပိုးသတ်ရမယ်။ သေချာလေး ထိန်းသိမ်းရမယ်။ အနံ့အသက်ကင်းဖို့လည်း ကိုယ်တိုင်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါမယ်။ သွေးဆင်းများတဲ့ လေဒီလေးတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေဖို့ ခက်ပါမယ်။
သွားလေရာကို လေလုံအိတ်လေးနဲ့ သေချာပိုးသတ်ပြီး ယူဆောင်သွားလို့ ရပါတယ်။ ပိတ်စဖြစ်တာကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ပြန်သုံးလို့ရမယ့်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်ပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်သုံးလို့ရတာကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ ကျဉ်းပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားလာတဲ့ လစဉ်သုံးပစ္စည်းလေး တစ်မျိုးပါ။ Menstrual cup လေးတွေက ၁၉၃၂ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ ဆီလီကွန်၊ ရော်ဘာတို့လိုမျိုး ခပ်ပျော့ပျော့ အသားလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းလောင်းပုံစံ ခွက်ကလေးက မိန်းမကိုယ်ထဲမှာ ရာသီသွေးတွေကို စုဆောင်းပေးမှာပါ။
Menstrual cup က တအားကြီးတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမကိုယ်ထဲကို ဆန့်နိုင်တဲ့ အရွယ်အစားပါ။ ယိုစိမ့်မှုလည်း မရှိစေပါဘူး။ ၁၂ နာရီကြာ အကောင်းဆုံး ထန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ နေရထိုင်ရတာ မသက်မသာ ဖြစ်စေတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ သွားလေရာကို သေချာပိုးသတ်ထားတဲ့ အိတ်လေးနဲ့ သယ်ဆောင်သွားလို့ ရပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။ အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး ၆ လ ကနေ ၁ နှစ်လောက်အထိ ခံပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးပေမယ့် လစဉ်ဝယ်စရာ မလိုတာကြောင့် ပြန်တွက်ကြည့်ရင် သိပ်မကွာလှပါဘူး။ ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုကတော့ Zero ပါ။
အသုံးပြုပြီးတိုင်းမှာ သေချာလေး ပိုးသတ်ဆေးကြောဖို့လိုပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက IUD (သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း) ထည့်ထားတဲ့သူတွေမှာတော့ အဆင်မပြေတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ သုံးလို့မရတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် သုံးပြီးတိုင်းမှာ ကြိုးကို စစ်ပေးပါ။
Tampons ကတော့ ဂွမ်းလိပ်လေးပါ။ မိန်းမကိုယ်ထဲ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ရာသီသွေးတွေကို စုပ်ယူပေးမှာပါ။ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ သူကလည်း pad တွေလိုမျိုး ကိုယ်သွေးဆင်းတဲ့ ပမာဏနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါမယ်။
လှုပ်ရှားရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးရှိပါတယ်။ ယိုစိမ့်မှုကလည်း ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ၄ နာရီကနေ ၈ နာရီလောက်အထိ အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ သွားလေရာကို သေချာပိုးသတ်ထားတဲ့ အိတ်လေးနဲ့ သယ်ဆောင်သွားလို့ ရပါတယ်။
လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ပျက်စီးဖို့ ခက်တာကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပေးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပလတ်စတစ်ပါဝင်မှု နည်းတာတွေ ရှိနေပြီဆိုတော့ သေချာရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကဲ…….. ဘာကိုရွေးမယ်စိတ်ကူးလဲ…….. လေဒီ ။ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု တိုးအောင် အားဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် period time friend လေးကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တော့နော် …… လေဒီလေးတို့ရေ
Menstrual Cups vs. Tampons: Things You Might Not Know https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/menstrual-cups-vs-tampons-things-you-might-not-know-about-the-cup/ Accessed Date 14 September 2021
Menstrual cups vs. pads and tampons: How do they compare? https://www.medicalnewstoday.com/articles/325790 Accessed Date 14 September 2021
How do I use tampons, pads, period underwear, and menstrual cups? https://www.plannedparenthood.org/learn/health-and-wellness/menstruation/how-do-i-use-tampons-pads-and-menstrual-cups Accessed Date 14 September 2021